IOTA စျေး - အွန်လိုင်း IOT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို IOTA (IOT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ IOTA (IOT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ IOTA ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ IOTA တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
IOTA များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
IOTAIOT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.412IOTAIOT သို့ ယူရိုEUR€0.349IOTAIOT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.316IOTAIOT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.376IOTAIOT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr3.72IOTAIOT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.6IOTAIOT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč9.19IOTAIOT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.54IOTAIOT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.551IOTAIOT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.575IOTAIOT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$9.21IOTAIOT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$3.19IOTAIOT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.24IOTAIOT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹30.85IOTAIOT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.69.5IOTAIOT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.565IOTAIOT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.623IOTAIOT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿12.85IOTAIOT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2.87IOTAIOT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥43.6IOTAIOT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩489.37IOTAIOT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦159.2IOTAIOT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽30.33IOTAIOT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴11.41
IOTAIOT သို့ BitcoinBTC0.00004 IOTAIOT သို့ EthereumETH0.00106 IOTAIOT သို့ LitecoinLTC0.00723 IOTAIOT သို့ DigitalCashDASH0.00426 IOTAIOT သို့ MoneroXMR0.00444 IOTAIOT သို့ NxtNXT29.96 IOTAIOT သို့ Ethereum ClassicETC0.0594 IOTAIOT သို့ DogecoinDOGE121.91 IOTAIOT သို့ ZCashZEC0.0045 IOTAIOT သို့ BitsharesBTS15.85 IOTAIOT သို့ DigiByteDGB14.08 IOTAIOT သို့ RippleXRP1.43 IOTAIOT သို့ BitcoinDarkBTCD0.0141 IOTAIOT သို့ PeerCoinPPC1.37 IOTAIOT သို့ CraigsCoinCRAIG186.06 IOTAIOT သို့ BitstakeXBS17.42 IOTAIOT သို့ PayCoinXPY7.13 IOTAIOT သို့ ProsperCoinPRC51.23 IOTAIOT သို့ YbCoinYBC0.000219 IOTAIOT သို့ DarkKushDANK130.92 IOTAIOT သို့ GiveCoinGIVE883.72 IOTAIOT သို့ KoboCoinKOBO92.3 IOTAIOT သို့ DarkTokenDT0.379 IOTAIOT သို့ CETUS CoinCETI1178.29
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 19:40:02 +0000.